चिकित्सा क्षेत्रमा जनशक्तिको लेखाजोखा गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह – Himalaya Television
२०७८ जेठ २८ गते १८:०२
२८ जेठ २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा क्षेत्रका कुन कुन विधामा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने लेखाजोखा गरेर शिक्षा नीति तर्र्जुमा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको साताै‌ बैठकलाई आज अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘‘हामीलाई मुटुरोग, क्यान्सर रोगजस्ता विषयमा कति विशेषज्ञ जनशक्ति चाहिएको हो ? कति मध्यमस्तरको जनशक्ति चाहिन्छ ? सामान्य प्राविधिक जनशक्ति कति चाहिन्छ ? यसको हिसाब हुनुपर्छ र त्यसअनुसारको जनशक्ति उत्पादन नीति हुनुपर्छ ।’’ सो आयोगको विगत दुई वर्ष सन्तोषजनक नभएकाले प्रभावकारी काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।